Xiaomi Mi Smartband 4 latsaky ny 30 euro ao amin'ny Amazon | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Smartband 4 no taranaka vaovao ny fehin-tànana Xiaomi, natolotra iray volana lasa izay. Taranaka vaovao tonga miaraka amina endrika nohavaozina sy fampidirana asa vaovao maro ao. Ka io dia kinova izay azo antoka fa hiteraka fahalianana amin'ireo mpanjifa erak'izao tontolo izao.
Roa herinandro lasa izay afaka mividy azy any Espana isika. Fa izao isika dia afaka mahazo ny Xiaomi Mi Smartband 4 amin'ny vidiny tsara indrindra. Azo alaina latsaky ny 30 euro amin'ny Amazon, na dia tolotra tokony hofotorantsika haingana aza. Holazainay aminao eto ambany ny zava-drehetra!
Raha liana amin'ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity ianao, Azonao atao ny mividy azy izao amin'ny vidiny 29,89 euro amin'ny Amazon, ity rohy. Izy io no vidiny tsara indrindra amin'ny fehin-tànana hatramin'ny nanombohana azy teny an-tsena. Ka io dia fihenam-bidy tsara amin'ny iray amin'ireo fehin-tànana malaza indrindra eny an-tsena ankehitriny.
Ankoatra izany, Maimaimpoana ny vidin'ny fandefasana amin'ny fividianana ity. Maneran-tany ny fandefasana azy ary horaisina eo anelanelan'ny 28 Jolay sy 8 Aogositra, miankina amin'ny faritra onenananao. Noho izany dia tsy mila mandoa vola fanampiny ianao hahafahana manana ny taranaka vaovao amin'ny fehin-tànana. Fotoana tsara handinihana.
Ity fampiroboroboana ny Xiaomi Mi Smartband 4 ity dia fotoana iray lehibe ho an'ireo tia fivarotana. Na dia tsy tokony hohadinoinao aza fa manana izahay ny fantsom-panafody anay manokana amin'ny Telegram, izay ahitanao an'io sy ny tolotra maro hafa misy ao. Ka azo antoka fa misy zavatra mahaliana anao. Topazo maso ny fantsona amin'ity rohy ity, izay ahafahanao miditra ao.
Raha liana amin'ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity ianao, aza adino ity fampiroboroboana azontsika amin'ny Amazon ity. Fampiroboroboana vonjimaika izy io, ka aza avela handositra, satria azo antoka fa betsaka ny mpampiasa liana amin'izany. Ahoana ny hevitrao momba ny bracelet an'ny marika sinoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Raiso ny Xiaomi Mi Smartaband 4 latsaky ny 30 euro amin'ny Amazon